Magacyadda Saddex Wadan Oo Ku yaala Afrikada Bari oo kenya Kaga Baxay Doorashada Aamina Maxamed |
Magacyadda Saddex Wadan Oo Ku yaala Afrikada Bari oo kenya Kaga Baxay Doorashada Aamina Maxamed
Hargeisa(GNN)-Ka dib doorashadii lagaga adkaaday Wasiirka arrimaha dibadda Kenya Aamina Maxamed inay noqoto guddoomiyaha guddiga Midowga Afrika oo uu ku guulaystay wasiirka arrimaha dibadda Chad Moussa Faki Mahama, waxa ay Salaasdii shalay saxaafadda u sheegtay inay jiraan dalal bariga Afrika ka tirsan oo marin habaabiyay dalka Kenya.
Aamina, oo saxaafadda kula hadashay Addis Ababa, iyadoo uu wejigeeda cadho ka muuqato, waxay ku baaqday inay Kenya dib u eegis ku samayso arrimo badan, iyadoo tilmaantay in dalal jaar la ah Kenya oo hore u balan qaaday inay codka siin doonaan ay aakhirkii u codeeyeen ninkii la tartamayay ee Chad.
Tartanka kursigan ayaa si adag u dhex maray dalalka Afrikaanka ee ku kala hadla luuqadaha Faransiiska iyo Ingiriisida, waxaanu mid waliba doonayay in gobalkiisu kursigan muhiimka ah ku fadhiisto. Geesta kale dalalka Bariga Afrika ayaa iyaguna si buuxda Kenya ugu balan qaaday inay codkooda siin doonaan Aamina Maxamed. Laakiin taasi may dhicin, “Arrimuhu way is bedeleen wareegii u dambeeyay.” ayay tidhi Aamina oo intaas raacisay, “Waxaan filayaa cabsida ay ka qabaan inaanu hoggaamino qaaradda ayaa sababtay inay la noqdaan taageeradooda.” , “Waxaanu nahay dad daacad ah, markaas way adagtahay inaanu la macaamilno dad khaa’imiin ah, laakiin hore ayaanu uga soconaynaa, waana cashar ay tahay inaanu wax ka barano.”
Waxa ay ku dooday inay Kenya cashar ka baratay tartankaas, “Dalalkaas ma waxaanu u aragnaa cadow mise saaxiib.” ayay tidhi.
Aamina Maxamed, ayaa wareegyadii hore u muuqatay inay iyadu qabanayso jagadan diblomaasiga u sareeya qaaradda Afrika, laakiin markii u dambeeyay waxa dhacay isbedel fajac ku noqday dawladda iyo diblomaasiyiinta Kenya. Waxaanay Aamina sheegtay dalal Kenya la jaar ahi inay marin habaabin ku sameeyeen taageeradii ay hore ugu balan qaadeen inay codkooda siin doonaan oo ahayd taageero aan niyadda ahayn balse afka ah. Dalalkan ayaa markii codka la tariyay la ogaaday inay u codeeyeen siyaasiga reer Chad, waxaanay dalalkan bariga Afrika ee Kenya kaga baxay taageerado kala yihiin Djibouti, Burundi iyo Yugaandha.
Dawladda Kenya ayaa hadii ay jagadan ku guulaysan lahayd waxay u noqon lahayd talaabo diblomaasiyadeed oo muhiim ah, waxaanay hoggaamiye ka noqon lahayd arrimaha qaaradda Afrika, gaar ahaan arrimaha bariga Afrika, iyadoo Aamina tahay qof aftahan ah oo saamayn badan yeelan lahayd islamarkaana Kenya u horseedi lahayd galaan-gal badan.
Madaxda Kenya ayaa jugdi badan ku bixiyay sidii ay Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Kenya, Amina Maxamed Jibriil ugu guuleysan lahayd Xilkaasi.